Ee ee, ị gụrụ nke ahụ nke ọma! Tupu ịghọ onye na-ahụ maka ire ahịa ike ike, Anissa bụ onye enyemaka eze na implantology na ịwa ahụ. Gosipụta na ọzụzụ niile ga-ekwe omume mgbe ị nwere ebe ọzụzụ kwesịrị ekwesị… na eze siri ike!
Onye ọ bụla na -ata Anissa ụta maka enweghị ntụgharị, gụọ ihe osise ya n'okpuru wee tụgharịa ire ya ugboro asaa n'ọnụ ya oge ọzọ! Maka na obere ihe anyị nwere ike ikwu bụ na nwa agbọghọ a enweghị ụkọ ego. Site na BAC STG (sayensị na njikwa na teknụzụ na teknụzụ) dị n'aka, DEUG na LEA (Asụsụ Mba Ọzọ etinyere) yana ahụmịhe ọkachamara dị iche iche dị ka onye nnabata ma ọ bụ onye na -enye ndụmọdụ ahịa yana ọbụna onye enyemaka eze, Anissa nwere ike gosipụta na ọ bụ ala niile. Ọ họrọla n'ezie '' inyocha '' ka ọ chọpụta ezigbo ọrụ ya, nke ọ ga -emecha hụ n'etiti ọkara azụmaahịa azụmahịa na odeakwụkwọ nchịkwa. "Ebe m nwalere ma ntakịrị, emechara m kwubie na nhọrọ kachasị mma abụghị ịhọrọ", ọ na -amụmụ ọnụ ọchị. Na ihu ọma, ọrụ onye nnyemaaka ahịa na -enye gị ohere ijikọta ndị ọrụ. Mgbe ọ dị naanị afọ 27, ọ họọrọ ịzụ ebe ahụ
Ịghọ onye na -ere ahịa: mgbanwe ọrụ Anissa na -akpali akpali. Ọnwa Iri 15, 2021Tranquillus
GỤỌ Nchekwa netwọkụ kọmputa
gara agaImekọ ihe ọnụ na ịdị n'otu: A na-ewu cybersecurity na ọkwa European Union
-esonụGbanwee ọrụ na ndụ ekele maka ọzụzụ onye enyemaka iwu: Aurélie na -agba akaebe.